Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » मलिका बन्दै पलको प्रिय के भन्छन् उनी ? (हेर्नुहोस् भिडियो सहित )
मलिका बन्दै पलको प्रिय के भन्छन् उनी ? (हेर्नुहोस् भिडियो सहित )
२०७७ चैत १९ गते बिहिबार १२:३७
म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका पल शाह अहिलेको चर्चित अभिनेता हुन् । उनले विभिन्न म्युजिक भिडियोदेखि नेपाली चलचित्रमा समेत काम गरिसकेका छन् । पलले एकसाथ १४ वटा म्यूजिक भिडियो साईन गरेको खबर पनि यतिबेला नै आयो भने हरेक...
म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका पल शाह अहिलेको चर्चित अभिनेता हुन् । उनले विभिन्न म्युजिक भिडियोदेखि नेपाली चलचित्रमा समेत काम गरिसकेका छन् । पलले एकसाथ १४ वटा म्यूजिक भिडियो साईन गरेको खबर पनि यतिबेला नै आयो भने हरेक दिन छायांकन गरिरहेको अवस्थामा पनि पल भेटिएन्छन्।
यहि बीचमा बनेको म्यूजिक भिडियो ‘फुलबुट्टे सारी’ले एउटा इतिहास रच्यो । यो भिडियोमा उनि मोडल तथा नायिका मलिका महतसँग देखिए । मलिकासँग पल उत्तिकै सुहाए । मलिकाले ‘यात्रा’ नामक चलचित्रबाट अभिनय यात्रा शुरुले गरेकी हुन् । उक्त चलचित्रमा उनले नायक सलिनमान बनियासँग अभिनय गरेकी थिईन् तर अहिलेको जति चर्चा त्यतिबेला भएन । लकडाउनमा पलले उषा उप्रेती, रियाशा दाहाल, गरिमा शर्मा लगायतसँग निकै काम गरे तर पनि पल र मलिकाको जोडीलाई धेरै दर्शकहरुले रुचाएका छन् ।
प्रकाशित मिति १९ चैत्र २०७७, बिहीबार १२:३७
२०७८ ब‌ैशाख ५ गते अाईतबार ०५:४१
यस्ता कुरा कहिल्यै पनि अरुलाई सापटीमा नदिनुस्
२०७८ ब‌ैशाख ४ गते शनिवार ०६:४६
म कहिल्यै देख्दिन के गरियो , म केवल यो देख्छु कि, के गर्न बाँकी छ -गौतम बुद्ध
२०७८ ब‌ैशाख ४ गते शनिवार ०६:३८
दक्षिणकालीको दर्शन गर्दै जान्नुहोस् आजको राशिफल सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुनेछ
२०७८ ब‌ैशाख ३ गते शुक्रबार ०७:४५